Izay no ela tompokolahy sy tompokovavy, lalana tsy zo ihodivirana, vavahady tsy maintsy nidirana ary fomba tokony sy tsy maintsy arahina, ny azafady sy ny fangatahan-dalana, satria fanomezam-boninahitra ny hitenenana ary haja ho an’ny miteny ihany koa.
Na dia nahazo alalana aza aho anefa, tsy hanao an-keriny sanatria tahaka ny tafio-drivotra, na hanararaotra tahaka ny banga mihomehy alina, na tsy hifidy vava havoaka tahaka an-dravavany. Tsy maintsy mitandrina aho sao solafaka, ary tsy maintsy avadibadika impito ny aloha ny lela vao miteny, fa ny teny hono toy ny salaka, ka ny tompony ihany no afatony!
Izany indrindra tompokolahy sy tompokovavy no tsy maintsy ialako tsiny eto anatrehanareo. Ny tsiny mantsy hono, misoko mangina tahaka ny ron-gisa, nefa ihany koa mamely tampoka toy ny horohoron-tany, miraraka amin’ny tsy ampoizina tahaka ny havandra. Loza ny tsiny satria afo mandoro ny lamba, raha tsy vonoina, aretina mahafaty raha tsy tsaboina. Koa raha mbola azo atao, ialako ny tsiny rey olona fa sao mamingana am-pandehanana, na manakotaba ny matory, na ihany ka manao vato manohariana, volo manoha-randrana, ka tsy ahitako ny rariny, ary tsy ahalalako ny hitsiny. Fa loza sy antambo mantsy ny ianjeran’ny tsiny, fa nihevitra ny handroso nefa nihemotra, naniry ny mba hiakatra kanjo nitambotsotra, niezaka ny ho voalohany nefa indrisy fa farany. Diso fanantenana tahaka ny vorondolo, ny mazava no nantenaina, kanjo tora-bato no azo; tsy mba mahazo sitraka tahaka ny miasa jamba rafozana, ary ratsy fiafara tahaka ny angadi-mondro, nahavita be indray vao arian’ny tompony.
Arak’izany matahotra ny tsiny aho tompokolahy sy tompokovavy, koa raha azo andosirana ilefasako, raha mbola azo sakanana ho tahanako, ary raha mbola azo ariana dia ho akifako.
Aiza ary no anariana ny tsiny, ariana akaiky sao manao tampody foy, akipily any any lavitra sao mitamberina, avela amin’izao; mampiditra angano. Koa aiza ary no hariko ny tsiny?
Ny zavatra rehetra tompokolahy sy tompokovavy manana ny antony sy ny fitoerany avy: ny kintana eny amin’ny lanitra, ny lambo any anaty ala, ny ranomaimbo eny Behoririka ary ny fako kosa eny Andralanitra. Koa ny tsiny re sy ny zava-mahatafintohina rehetra, mba manana ny fitoerany, tahaka ny amboahaolo manan-davaka ary toy ny voro-manidina manana ny fialofany. Koa aza matahotra, fa hitako ny anariana ny tsiny, tsy havarina any Ampahamarinana akory hanahirana, na any Ikopa hitopatopa hamadika ny lakana, hanapoizina ny trondro, handoto rano. Fa hitako kosa ny hanaovana azy, raha lalana iray no nidirany, lalana fito kosa no ivoahany, hiala ao amin’ny mahamay ny tsiny ary ho any amin’ny mangorovitsika; tsy hotamana eto aminy tany onenana, fa ho any amin’ny toerana fandevonana azy, ka any tsy hisy hiangana na ny sampany na ny fakany, satria ariana any amin’ny afo maharitra mandrakizay ny tsiny dia ny afobe izany.
Koa dia hiadam-pinaritra isika tompokolahy sy tompokovavy, satria levona ilay rangory fototry ny afo, ary fongotra ny fanetriben’ny tany dia ny tsiny izany, koa dia salama aza marofy tompoko o! Samy ho tahian’Andriamanitra!
129 votes. Moyenne 2.83 sur 5.